Xildhibaan Cosoble Oo Eedeeyn Kulul U Jeediyay Xukuumadda Ra’iisulwasaare Kheyre. – Idil News
MUQDISHO(BO)- Xildhibaan C/qaadir Cosoble oo kamid ah Golaha Shacabka Baarlamaanka JF Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ku caanbaxday seddex dabeecadood oo caqabad ku ah horumarka Soomaaliya.
Xildhibaanka Cosoble ayaa sheegay in tan iyo markii la ansixiyay xukuumadda Soomaaliya ay jiraan walwal badan oo laga qabo xukuumadda, isaga oo sheegay in Maquunis iyo hanjabadaad ay ku can-baxday xukuumadda.
Waxaa uu Sheegay in Dadka Soomaaliyeed ay walwal badan ka Qabaan Dabeecadaha ay lasoo baxday Xukuumaddu ee ah Handadaada, Maquuninta iyo Musuq.
Dhanka kale, Xildhibaan Cosoble ayaa Xusay in Weeraradii kala duwanaa ee dalka ka dhacay oo qaarkood siyaasiyiin lagu qaaday ay qeyb ka ahaayeen handadaada xukuumadda ay sameyneysay, taasina ay keentay niyad jab.
Ugu dambeyntii, Xildhibaan C/qaadir Cosoble ayaa Fashilka Xukuumadda Tusaale uga dhigtay Weerarkii Bariire, Dhiibitaankii Qalbi Dhagax, aqoonsigii ONLF ee argagixisada u aqonsatay xukuumadda Soomaaliya iyo weeraradii Siyaasiyiinta qaar loogu geystay magaalada Muqdisho.